ဆေးဝါးနှင့်အာဟာရဖြည့်ဆေးစက် - Micvd.com
ဆေးဝါး & အာဟာရဖြည့်စက်
NPACK ဆေးဝါးနှင့် nutraceuticals အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်အရည်ထုပ်ပိုးစက်ယန္တရားကမ်းလှမ်းသည်ဂုဏ်ယူသည်။ သင်၏ထုပ်ပိုးလိုင်းအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်အသုံးပြုမည့်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကြာရှည်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစက်ကိရိယာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်တည်ဆောက်ထားသောစက်ယန္တရားများကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ NPACK သူတို့အားသတ်မှတ်ချက်များနှစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောစက်ယန္တရားကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။
အမြှေးပါး၊ အမြှုပ်များနှင့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များပိုမိုကွဲပြားသည်။ NPACK သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်သင်အသုံးပြုသောပုလင်းသုံးကိရိယာများသည်သင်ထုတ်လုပ်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အလွန်အမင်းကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ဆေးဝါးနှင့်အာနိသင်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြည့်တင်းသည့်စနစ်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ယန္တရားများကို၎င်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးချေးသည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ချေးသည့်ပစ္စည်းများကို HDPE (မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ polyethylene)၊ UHMW သို့မဟုတ် PVC ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများမှတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထိရောက်မှုရှိစေရန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ NPACK အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာစက်တစ်လုံးတည်းသာလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်စေထုပ်ပိုးလိုင်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေသင်ဒီမှာသင်လိုအပ်တာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အရည်ဖြည့် Lines များအတွက်ရရှိနိုင်ပစ္စည်း
ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ် NPACK ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာလိုင်းများ၏ရှုထောင့်အားလုံးအားအစမှအဆုံးအထိအစေခံနိုင်ရန်။ ကုန်ပစ္စည်းမဖြည့်မီကွန်တိန်နာများကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကပ်သည့်စက်များသို့သင်၏ကုန်သေတ္တာများသို့ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်ပစ္စည်းများအထိကုန်ပစ္စည်းများတံဆိပ်ကပ်စက်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများမကုန်ခင်ကွန်တိန်နာအညစ်အကြေးများကင်းစင်ကြောင်းသေချာစေရန်၊ ကွန်တိန်နာတစ်ခုစီသို့ကွန်တိန်နာများကိုသယ်ဆောင်ရန် conveyor များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရည်ဖြည့်သည့်စက်များပါဝင်သည်။
အသားတင် Filler သည်
အဘယ်ကြောင့် Choose NPACK ထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာ?
မှန်ကန်သောပုလင်းစနစ်မရှိပါကသင်၏ဆေးဝါးနှင့်အာနိသင်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းထိခိုက်နိုင်သည်။ ချေးခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ရေမြှုပ်ခြင်း၊ ကျန်ရှိသောအရာများနှင့်အခြားအရာများအားလုံးသည်သန့်ရှင်းသောစံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်သာမကသင်၏လိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်စေရန်ခက်ခဲစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြည့်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ရေးလိုင်းရှိဓာတုပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့သင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပုလင်းထုတ်ခြင်းများသည်သင်၏စက်များကြောင့်အပျက်သဘောသက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် nutraceutical နှင့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့်ပုလင်းသတင်းပစ္စည်းဖြေရှင်းချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကသူတို့လိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်ကူညီပေးရတာဝမ်းသာပါတယ်။
Monoblock ဖြည့်ခြင်းနှင့် Capping စက်
စက်သည်မတူညီသောအရည်အမျိုးအစားများကိုဖြည့်ရန် 316L သံမဏိစုပ်စက်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသည်။ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့်ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ။
စုပ်စက်နှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အရည်ကိုဖြည့်နိုင်သော၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လွယ်ကူသည်။
3. Volume ကိုဖြည့်ရန်လွယ်ကူသောညှိနှိုင်းမှုနှင့်ဖြည့်ထားသော nozzles တစ်ခုစီအတွက် micro ညှိခြင်းတပ်ဆင်ထားသည်
နှာစေးခြင်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ foamy အရည်များအတွက်အဆင်ပြေအောက်ခြေအဆာ
5.WILLIAMSON peristaltic pump သို့မဟုတ်ကြွေထုပ်စုပ်စက်သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်
အချက် NP-MFC8 /2NP-MFC4 / 1
ဖြည့်စွက် nozzle 8 4
nozzles capping21
အဆာအကွာအဝေး 20 ~ 1000ml
စံနမူနာဖြည့်အကွာအဝေး 20-100ml \_50-250ml\_100-500ml\_200ml-1000ml
ဦးထုပ်အမျိုးအစားများ သော့ခတ်ထုပ်， ဝက်အူ， ROPP, လူမီနီယမ်အဖုံး
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် 3600 ~ 5000b / h 2400 ~ 3000b / h
ဟုတ်မှန်ရေး ±± 1％
Capping မှုနှုန်း ၁၂.၀
ဗို့အား 220V 50 / 60Hz
စွမ်းအား ≤2.2kw ≤1.2kw
လေဖိအား 0.4 ~ 0.6MPa
Net ကအလေးချိန် 1100kg 900kg
Dimension (မီလီမီတာ) 2600 × 1300 × 1600 2200 × 1300 × 1600
၁။ Monoblock စက်ဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနေရာ
ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားဖြည့်စနစ်ကိုရွေးချယ်ပါကစက်သည်ပါးလွှာသောအရည်များကို viscosity အရည်သို့ဖြည့်နိုင်သည်
ပုလင်းငယ်များအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်မတည်မငြိမ်ပုလင်းဖြည့်, အဆို့နှင့်ထုပ်များအတွက်လျှောက်လွှာဖြစ်ပါတယ် e- အရည်ပုလင်းများ, ဆေးထိုးဖလားများနှင့်ပါးစပ်တွင်းအရာတစ်ခု နောက် ... ပြီးတော့။
အလုပ်လုပ်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန် Siemens နှင့် PLC စနစ်၊ အလှည့်ကျကြယ်ပွင့်ဘီးပေါ်သယ်ဆောင်ပုလင်း
အချက် NP-FSC2 / 1 NP-MFC4 / 2
ဖြည့်စွက် nozzle24
nozzles capping 1 2
လေအေးပေးစက် nozzle 1 2
အဆာအကွာအဝေး 1-10ml, 10-30ml, 30-100ml
စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် 30-40b / မိနစ် 60-80b / မိနစ်
စွမ်းအား ≤1.2kw ≤2.2kw
Net ကအလေးချိန် 600kg 700kg
Dimension (မီလီမီတာ) 1500 × 1300 × 1800 1800 × 1500 × 1800
၃။ အလိုအလျောက်အောက်ခြေအဆို့၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို mono block
5.The အဆာစနစ်ကပစ္စတင်အဆာ, ကြွေစုပ်စက်ဖြည့်သို့မဟုတ် WILLIAMSON peristaltic စုပ်စက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်အမှုန့် auger အဆာနှင့် capping စက်
အမှုန့်ဖြည့်ခြင်းနှင့် capping စက်သည်ပုလင်းများ၊ ဖလားများနှင့်ဘူးခွံများသို့အလိုအလျောက်အမှုန့်ဖြည့်ခြင်းအတွက်အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် glitter အမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ cayenne ငရုတ်ကောင်း၊ နို့မှုန့်၊ ဆန်မှုန့်၊ albumen အမှုန့်၊ ပဲနို့မှုန့်၊ ကော်ဖီမှုန့်၊ ဆေးမှုန့်၊
၎င်းသည်ပုလင်းနို့တိုက်ကျွေးသောစားပွဲသို့မဟုတ်ပုလင်းဖလားကိုအစကနေ စ၍ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး NP-RL ပတ်ပတ်လည်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်သို့မဟုတ် NP-TS နှစ်ဖက်ခြမ်းတံဆိပ်ကပ်စက်နှင့်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးထားသောလိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်၊ level split hopper၊ အလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်သည်
Servo-motor မောင်းနှင် auger ။
တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ Servo-motor ကိုထိန်းချုပ်ထား turntable ။
PLC၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အလေးချိန် module ထိန်းချုပ်မှု။
ပုံစံ NP-PAF-1 NP-PAF-2
ပုလင်းအချင်း Φ15-80mm (စိတ်ကြိုက်)
ပုလင်းအမြင့် 15-150mm (စိတ်ကြိုက်)
အလေးချိန်ဖြည့်သည် 1 – 5g,5-30g,30-100,100-500g
ဖြည့်စွက်တိကျပြတ်သားမှု g 100g, ± 2%; 100 - 500 ဂရမ်± 1%
မြန်နှုန်းဖြည့် ၁၅ - ၃၅ ပုလင်း / မိနစ် 30 - 70 ပုလင်း / မိနစ်
Power ကထောက်ပံ့ရေး 3phase AC380V 50 / 60Hz
air Supply6ကီလိုဂရမ် / cm2 0.05m3 / min
စုစုပေါင်းပါဝါ 1.8Kw 2.3Kw
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 450kg 550kg
ယေဘုယျအားအရွယ်အစား 1400 × 1120 × 1850mm 1700 × 1420 × 2000mm
Hopper Volume ကို 35L 25L (နှစ်ပေါက်)
1. Servo မော်တာမောင်းနှင်, Siemens PLC နှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
2. အမှုန့် Hopper သို့အစာကျွေးရန်အလိုအလျှောက်အမှုန့်လမ်းခွဲနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
၄။ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အိုင်တီသည်ဖြည့်ထားသော nozzle နှင့် capping head ကိုတိုးမြှင့်သည်